January 2018 – Doh Pyay Doh Myay / Our Land Our Region
by DPDMadmin · Published January 24, 2018
KACHIN IDP DPDM5 # 19
Welcome to the 19th show of the 5th season of Doh Pyay Doh Myay. This week we’ll take you to Kachin IDP (Kachin State) ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KIA) နဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်တို့သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လမှာ...
TAUNGGYI DPDM5 # 18
Welcome to the 18th show of the 5th season of Doh Pyay Doh Myay. This week we’ll take you to Taunggyi (Shan State). ဒီတစ်ပတ်တို့ပြည်တို့မြေအစီအစဉ်ကနေ တင်ဆက်ပေးသွား မှာကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရဲ့ မြို့တော်တောင်ကြီးရဲ့ အထင်ရှားဆုံးပွဲတော် တန်ဆောင်တိုင်မီးပုံးပျံပွဲတော်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာသာမကကမ္ဘာကပါစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ တန်ဆောင်တိုင်မီးပုံးပျံ ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ယမ်းတွေနဲ့အလှဆင်ရတဲ့အတွက် တစ်ခါတစ်ရံ...
MAING THAUK DPDM5 # 17
Welcome to the 17th show of the 5th season of Doh Pyay Doh Myay. This week we’ll take you to Maing Thauk (Shan State). ညောင်ရွှေရဲ့ ၃၃ ယောက်မြောက်စော်ဘွား တစ်ချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံးသမ္မတဖြစ်လာသူ။ စဝ်ရွှေသိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဒေသ ဗမာညောင်ရမ်း ရှမ်းညောင်ရွှေလို့စာဆိုရှိဖူးတဲ့ဒေသ ရွှေညောင်နဲ့ညောင်ရွှေမကွဲတဲ့ဒေသနဲ့...
by DPDMadmin · Published January 23, 2018
AUNGLAN DPDM5 # 16
Welcome to the 16th show of the 5th season of Doh Pyay Doh Myay. This week we’ll take you to Aunglan (Magway Region). မြေထဲ ၊အာလန်၊ အောင်လံ စတဲ့ အမည် ၃ မျိုးနဲ့ ယခုထိတိုင် တည်ရှိ နေတဲ့ မြို့...
Next on DPDM >
Watch it first this Saturday 17:30h on DVB TV
DPDM is brought to you by:
PEP LOGO (RGB) JPEG
FALAM DPDM6 # 02
HAKHA DPDM6 # 02
DAGON SEIKKAN DPDM6 # 01
DEMOSO DPDM5 # 24
PEKON DPDM5 # 23
Other DVB programs
Democratic Voice of Burma in Burmese
Doh Pyay Doh Myay / Our Land Our Region © 2016. All Rights Reserved. Created by Tokodomis.com